“Andao hilalao” : hampianarina ny ankizy ireo kilalao malagasy | NewsMada
“Andao hilalao” : hampianarina ny ankizy ireo kilalao malagasy
Sady fialamboly mandritra ny fialantsasatra no fampiainana ny kolontsaina malagasy ho an’ireo ankizy ny “Andao hilalao”. Manitatra ny saina sy mampivelatra azy ireo koa.
Fialantsasatra ny andro ho an’ny ankizy madinika. Ho an’ireo tsy afa-mivoaka ny renivohitra, raikitra indray ny “Andao hilalao”, izay hiditra amin’ny andiany fahatelo amin’ity. Fampitiavana sy fampianarana ireo ankizy ireo kilalao malagasy izay mihavery no tena hatao mandritra ny hetsika, ny 17 jolay hatramin’ny 19 aogositra ho avy izao.
Hampianarina ireo ankizy ny vitsilihy, sabaka, raosy jamba, fanenjika, tsikonina, sns. Ankavitsiana mantsy ireo manana tokontany malalaka afaka hilalaovan’ny ankizy maro an’izany, ary tsy dia nisy nampita intsony koa ireo kilalao ireo fa resin’ny kilalaom-bazaha.
Homena sehatra iarahany milalao koa ireo ankizy na tsy mifankafantatra aza, ka hiampy ireo karazan-dalao miendrika fifaninanana toy ny hazakazaka kalesa, ady baolina “sachet”, hazakazaka kapoaka, sns, izany. Isaky ny hariva ny fifaninanana ka mahazo loka avy amin’ireo mpanohana izay mendrika amin’ireo ankizy.
Fampiainana ny kolontsaina koa
Tsy karazan-dalao fotsiny no hita amin’ny “Andao hilalao”, fa eo koa ny fampiainana ny kolontsaina malagasy ho an’ireo ankizy 4 hatramin’ny 13 taona. Hisy, araka izany, ny fampianarana ny karazan-dihy malagasy, hira, hosodoko, teatra, sns.
Hisy koa ny fitsidihana toerana manan-tantara, raha tsy hilaza afa-tsy ny mozea etsy Isoraka. Miisa dimy ny fivoahana hataon’ireo ankizy, ka hitondra azy ireo amin’izany ireo mpitari-dia avy amin’ny ofisim-paritra ho an’ny fizahantany eto Antananarivo (Ortana).